Kwakutheni ukuze uThixo aphumle ngomhla wesixhenxe? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kwakutheni ukuze uThixo aphumle ngomhla wesixhenxe? Xa sibhekisa kumhla wesixhenxe wendalo, sikwenza oko ngokukhankanya oko UThixo waphumla akugqiba umsebenzi wakhe. Ngale ndlela ivakaliswe njengengcwele. Nangona kunjalo, le ngxelo iphethe ezinye Iziphumo zendalo kaThixo ezingachanekanga, esikhokelela ekubeni siwutolike gwenxa umyalezo oyinyaniso womhla wesixhenxe.
1 Kutheni uThixo ephumle ngomhla wesixhenxe: Intsingiselo
2 Ngaba uThixo uyadinwa?
3 Isiphelo sokugqibela
Kutheni uThixo ephumle ngomhla wesixhenxe: Intsingiselo
Isizathu sokuba uThixo aphumle ngomhla wesixhenxe
Xa sithetha ngokuphumla kukaThixo ngomhla wesixhenxe, sikwenza oko ngokuqonda ukuba uThixo kufuneka aphumle emsebenzini odinisayo wokwenza izulu nomhlaba. Nangona kunjalo, esona sizathu sokuba aphumle ibikukucinga ngomsebenzi wakhe, awusikelele kwaye awungcwalise. Ke ngoko, ukuphumla kukaThixo kusebenza njengomzekelo ukuze nathi masiphumle kwaye sonwabele umgudu wethu.
IGenesis 2: 3
Ngaba uThixo uyadinwa?
Ukuphendula lo mbuzo kufuneka ufunde iBhayibhile:
Anazi na, anivanga na ukuba uThixo ongunaphakade nguYehova, uMdali weziphelo zehlabathi? Akadinwa, akayeki nokudinwa, nokuqonda kwakhe akunakufikelelwa.
UIsaya 40: 28
Njengoko ubona, uThixo akadinwa. Umdali wethu ngumthombo ongapheliyo wamandla. Ukuphumla kukwathetha ukuyeka umsebenzi. Xa sifunda iGenesis 2: 2, oko akuthethi ukuba uThixo waphumla ngenxa yokudinwa, kodwa wayeka ukusebenza ngaloo mini.
Agqitywa ke amazulu nehlabathi, nawo wonke umkhosi wezo zinto. Wawugqiba ke uThixo ngomhla wesixhenxe umsebenzi wakhe awawenzayo; waphumla ngomhla wesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe awawenzayo.
Ngomhla wesixhenxe, uThixo wayegqibile konke awayecebe ukukwenza. Kwakungekho nto iseleyo yokwenza. Ke ngoko, UThixo wayeka ukudala waphumla.
Oku akuthethi ukuba uThixo akasabandakanyeki el mundo. UThixo uphumle nje ekudaleni umhlaba. Qhubeka usebenza kude kube namhlanje. UThixo akaphumli okanye athathe iholide ukukhathalela umhlaba. Uhlala ekhona, ethatha inxaxheba kubomi bethu. Alikho ixesha apho uThixo angafumaneki ukusinceda.
Wawaphendula ke uYesu wathi, UBawo uyasebenza kude kube ngoku, nam ndiyasebenza.
Yohane 5: 17
UThixo waphumla ngomhla wesixhenxe njengomzekelo kuthi. UThixo akadinwa, kodwa nathi siyadinwa. Kufuneka sithathe ixesha lokuphumla. IGenesis 2: 3 ithi uThixo wawusikelela wawungcwalisa umhla wesixhenxe. Umhla wesixhenxe wabekelwa bucala njengosuku lokuphumla nokunikezela kuThixo.
Ukuphumla kubalulekile. Akubalulekanga nje ukuvuselela amandla ethu, kodwa kukwakhona Ukuphuhlisa ubudlelwane noThixo kunye nokuxabisa indalo yaKhe. El ukuphumla kufuneka kube rhoqo; UThixo umisele usuku olunye ngeveki ukuba sibe nesiqhelo. Ke ngoko, Ungcwalise usuku lwesixhenxe ukuqinisekisa ukuba sihlala sinako konke esikufunayo.
Khumbula umhla weSabatha ukuba uwugcine ungcwele.
Wosebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho;
ke wona umhla wesixhenxe uyisabatha kaYehova uThixo wakho. ungenzi namnye umsebenzi ngawo, wena, nonyana wakho, nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nokuba yinkomo yakho, nowasemzini osemasangweni akho;
IEksodus 20: 8-10
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde eyona ntsingiselo kwakutheni ukuze uThixo aphumle ngomhla wesixhenxe. Ukuba unomdla wokwazi i- Isizathu sokuba amaKristu angaphumli ngoMgqibelo ngokusebenzisa iivesi zeBhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.